Tirquesa बाथरूम सजावट टाइलहरु सजाउनुहोस्
फ़िरोज़ा टाइल बाथरूम
El निलो र / वा नीलो हरियो यो एक खाम, ताजा र आरामदायक रंग हो जुन सामान्यतया समुद्रसँग सम्बन्धित छ। यी सुविधाहरू र सम्बद्धताहरूले यसलाई बाथरूम सजाउन उचित रंग बनाउँदछ। यसले तपाइँलाई थकाइ पछाडि आराम दिन आराम गर्दछ, तर नयाँ शक्ति दिन र नयाँ शक्ति र विचारहरूको साथ सुरू गर्न।
को फ़िरोज़ा निलो टाइलहरू तिनीहरू बाथरूमको भित्ताहरू सजाउन एक उत्कृष्ट उपकरण बन्छन्। सिरेमिक वा गिलास सामग्रीहरूमा, उनीहरूलाई काठको फर्नीचर र / वा सफा सेतो सतहहरूसँग मिलेर एकै समयमा आधुनिक र तातो ठाउँहरू प्राप्त गर्न सामान्य छ।
1 हामी कस्तो प्रकारको फ़िरोज़ा टाइलहरू छान्छौं?
2 हामी कस्तो प्रकारको फर्निचरसँग उनीहरूलाई मिलाउँछौं?
हामी कस्तो प्रकारको फ़िरोज़ा टाइलहरू छान्छौं?
फ़िरोज़ा टाईलहरू असंख्य संयुक्त सम्पादकीयहरूमा देखा पर्दछ। को अन्त्य विभिन्न शेडहरूलाई जोड्नुहोस् समान दायरा भित्र, यो समुद्रको विभिन्न शेडहरूको नक्कल गर्दै अन्तरिक्षलाई ठूलो गहिराई प्रदान गर्नु बाहेक अरू कुनै होइन। यो प्रवृत्ति छोडे बिना हामी टाईलमा विभिन्न ढाँचामा शर्त लगाउन सक्छौं।
को विस्तारित टाइलहरू तिनीहरूले विशालताका भावना प्रदान गर्छन्, तिनीहरूलाई सजिलो बनाउँदा साना बाथरूमहरू सजावट गर्दा। यदि तपाईं सरलता खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तिनीहरू तपाईंको उत्तम प्रस्ताव हुन्। तिनीहरू पनि न्यूनतम बाथरूम सजावट को लागी तपाईंको सबैभन्दा राम्रो सहयोगी हो, यदि तपाईं टोन को खेल लाई बेवास्ता र एक समान स्वर मा छान्नुभयो भने।
विस्तारित ढाँचा टाइलहरू बाहेक, त्यहाँ अन्य विकल्पहरू छन् जुन तिनीहरूको डिजाइनको लागि बाहिर खडा छ। हामी अनौठो आकृतिहरूका मोजेक टाइलहरूबारे कुरा गर्दैछौं जुन हामी पहिलो छविमा पाउँछौं। को स्केल र अरबीस्क मोज़ेक यस सम्बन्धमा उनीहरू मेरो मनपर्नेहरू हुन्; तिनीहरूले व्यक्तित्व को एक धेरै ल्याउँछ।
हामी कस्तो प्रकारको फर्निचरसँग उनीहरूलाई मिलाउँछौं?
यदि तपाईं आफ्नो बाथरूमको लागि न्यूनतम शैली चाहानुहुन्छ भने सफा सेतो सतहको साथ फर्नीचरको लागि जानुहोस्। यदि, अर्कोतर्फ, तपाईं न्यानो ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ भने, छनौट गर्नुहोस् काठको फर्नीचर मध्यम वा गाढा टोनमा। तिनीहरूसँग तपाईं दुबै परम्परागत र आधुनिक ठाउँहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, सेतो टोनमा फ्रीस्टेन्डि sin सि sinक र बाथटबहरू समावेश गर्दै।
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » स्पेसहरू » बाथरूम » फ़िरोज़ा टाइल बाथरूम
म लोको चमक फिरोज़ा टाइलहरू जस्तै खोज्दैछु, तर म कहाँ भेट्टाउन सक्छु?
ट्यूनमा जवाफ दिनुहोस्
फॅब्रिकेडेरोजोल.कटमा तपाईले सबै र colors्ग र आकारका टाइलहरू भेट्टाउनुहुनेछ, हामी निर्माता र सिरामिकका विशेषज्ञहरू हौं।
कारखानालाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईको योग कोठामा सजावटका लागि सुझावहरू
तपाईंको घरको सजावटमा भाँडा